TOOSHKA PTIMES:Puntland & Somaliland oo si adag ugu loolamaya gacan ku heynta G. Sool Maxaase laga filan karaa Daruuraha colaadeed ee dul hoganaya Laascaanood? – Puntlandtimes
TOOSHKA PTIMES:Puntland & Somaliland oo si adag ugu loolamaya gacan ku heynta G. Sool Maxaase laga filan karaa Daruuraha colaadeed ee dul hoganaya Laascaanood?
July 12, 2018 W LAASCAANO
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Maalmo iyo bilo dhaw ma bilaaban loolanka ku aadan gacan ku heynta gobalka Sool oo u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland, wuxuuna soo taagnaa tan iyo markii la dhisay la dhisay maamuladan, oo ay dadka gobalada Sool, Sanaag & Cayn qeyb ka noqdeen, waxaana labada dhinacba sii xoogeystay xiisadaha u dhaxeeya, taas oo marba jawi gaar ah yeelanaysay.
Sannadkii 2002-dii ayuu toos u bilowday dagaalka dhanka ciidamada ah ee ay isku adeegsadeen labada dhinac, markii Madaxweynihii Puntland ee xiligaas Col, Cabdullaahi Yuusuf Axmed amar buuxa ku siiyey cutub kamid ah ciidamadiisa Daraawiishta in ay qabsadaan Laascaanood, xiligaas oo uu magaaladaas booqasho ku joogay Madaxweynihii Somaliland Col, Daahir Riyaale Kaahin, kuna baxay wadada maanta loo yaqaano RIYAALE KU CARAR.
Cutubkaas ciidan ee Puntland oo aroornimo hore ka dhaqaaqay Garoowe, waxay si fudud gacanta ugu dhigeen Xaruntii uu daganaa Madaxweynaha Somaliland iyo dhamaanba magaalada, waxayna gaareen deegaanka Ari-Cadeeye oo masaafo ka durugsan magaalada Laascaanood.
Qabsashada Puntland ee Laascaanood, waxay Somaliland ku noqotay filan-waa iyo abaabul cusub oo ay isku diyaariyeen, kaas oo qaatay mudo 5 sanno ah oo dibu dhis weyn lagu sameeyey ciidamada maamulkaas, waxayna mar kale gacantooda dib ugu ceshaan Laascaanood bishii October 2007-dii, xiligaas oo ay magaalada joogeen Wasiiraddii ugu tiradda badnaa ee kasocday Xukuumada Puntland, oo uu xiligaas hogaaminayey Allaha u raxmadee Jen, Maxamuud Muuse Xirsi (Cadde Muuse), waxayna ciidamada Somaliland gaareen xiligaas deegaanka Gambara oo masaafo ka durugsan magaalada Laascaanood.
Wadamada saaxiibka ah labada dhinacba waxay xooga saareen sidii Somaliland ay ugu sugnaan lahayd Laascaanood, waxaana warar hoose ay marar badan cadeeyaan in ay jireen heshiisyo siyaasadeed oo lagu gaaray meelo qarsoon, kuna saabsan cidda gacanta ku haynaysa magaaladaas, laakiin ma jiri karto cid xaqiijin rasmi ah ku sameysay arrimahan.
Somaliland markii ay qabsatay Laascaanood, waxay sameysay talaabooyin dheeraad ah oo ay ku raadinaysay kalsoonida beelaha gobalka iyo sidii ay deegaano cusub ugu sii durki lahayd, waxaana xiisaddu mar kale curatay horaantii sannadkan markii ay ciidamada maamulkaas aroornimo hore la wareegeen magaalada Tukaraq oo ahayd kastamkii ugu weynaa ee Puntland ka xukuntay gobalka Sool.
Xiligaas Madaxda Puntland ayaa ku mashquulsanaa u dabaal-daga 4 sanno guuradii kasoo wareegtay markii la doortay Madaxweyne Gaas & Soo dhaweynta Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo xiligaas kusugnaa magaalada Garoowe ee caasumada Puntland.
192 maalmood ayay taagan tahay xiisadda ka dhalatay dhaqdhaqaaqyadii ay sameeyeen ciidamada Somaliland, waxaana halkii ugu sareeyey gaartay damaca labada dhinacba ay ku doonayan in ay ku gaaraan guulo dhanka dagaalka ah iyo siyaasadaba, waxaana Puntland ay geysay furimaha hore ciidamadii ugu badnaa, sidaas oo kalena Somaliland ayaa dhankeeda keentay cududeeda.
Dagaal dhaca ayey ku xiran tahay oo kaliya Askar xabado rida, taas oo ka dhigan in xaaladdu ay xili kasta isku bedeli karto dagaal rasmi ah, waxaana maalmihii ugu dambeeyey ay dhinacyaduba kordhiyeen joogitaankooda Saldhigyada iyo qaabeynta howlgalintooda, waxayna askartoodu tahay KEEB LA YUURUR.
Dadka la socda arrimaha muranka labada dhinac ayaa rumeysan in haddii dagaal dhaco uu noqon doono kii ugu cuslaa 20-kii sanno ee lasoo dhaafay dhexmara dhinacyada Soomaalida, waxaana hubka culus oo nooc kasta ay haystaan labada dhinac, iyadoo la ogaaday in ay dhamaadeen dadaalo ay garwadeen ka ahaayeen wadamada gobalka iyo Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayay u tahay dhaqdhaqaaqa uu ka sameeyey xaduudaha barri ee maamulkiisa fursad uu kaga dhabeeyey balan-qaadkiisii doorashada, wuxuuna taageero dhaqaaqa ciidan uga helay labada aqal ee baarlamaanka, sidaas oo kalena beelaha qaarkood ayaa taageeray qorshihiisa, isagoo horey u balan-qaaday in uu ciidamada Somaliland gaarsiin doono xadka ay sheegato maamulkaas doorashadii dhacday bishii November 2017-kii.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa 7 january 2014-kii wuxuu balan qaaday in haddii la doorto Laascaanood ay dib gacanta maamulkiisa ugu soo laaban doonto, wuxuuna cadeeyey in aan lagu qabsan Faataxo ee lagu qabsaday dagaal, taas oo ka dhigneyd weedh adag oo aysan isticmaalin Musharaxiintii maalintaas loolanka adag kula jirtay, laakiin sannadyadii hore Xukuumaddiisu waxba ka hirgalin balan-qadkaas, haddana xiisaddaha Tukaraq ka bilowday ayaa la rumeysan yahay in ay fursad wanaagsan u yihiin ka dhabeynta balan-qaadkii dib u soo celinta Sool.
Masuuliyiin uu hor-kacayo Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng, CabdiXakiim Cumar Camey oo ka soo jeeda gobalka lagu muransan yahay ee Sool, ayaa cadaadis ku saaraya Madaxweynaha Puntland, sidii uga dhabeyn laha balan-qaadkiisii, isla markaasna dib gacanta loogu soo celin lahaa magaalada Laascaanood, iyadoo laga jawaabayo Daan-daansiga maamulka Hargeysa.
Khuburadda ku foogan arrimahan ayaa rumeysan in haddii dagaal dhaco, uu labada dhinacba ku keeni doono khasaare dhinacyo kala duwan, gaar ahaana marka laga hadlayo dhinaca Isku socodka, khasaaraha Milateri iyo ganacsiga oo hakad gali kara, laakiin cidii guuleysta oo adkeysata gacan ku heynta Laascaanood, waxay uga dhigan tahay guul weyn oo dhinacyada siyaasadda iyo ammaanka ah.
Puntland oo qabsata Laascaanood waxay uga dhigan tahay Madaxweyne Gaas & Xukuumadiisaba guul weyn oo ay hantiyeen, taas oo aysan fursad u helin maamuladii ka horeeyey ama ay ka gaabiyeen, waxaana taageero xoog badan uga helayaa bulshada deegaanadaas oo aad ugu foogan wararka la xariira arrimaha dagaalka.
Somaliland waxay u tahay guul darro weyn oo dhinacyada Siyaasadda & Ammaankaba saameynaysa, maadaama Laascaanood ay ka mid tahay deegaanadii ugu badnaa ee uu codadka ka helay Xisbiga Kulmiye ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi, waxaana shaki saarneyn in siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Sool, Sanaag & Cayn-ba ay ku noqonayso filan-waa iyo waa cusub oo u baryay, hoosna ay u dhici doonto saameynta ay hadda ku leeyihiin go’aanada Somaliland.
F/G: U GAAR AH PUNTLANDTIMES.COM